Midab - Xargaha tolidda, Dunta xargaha - Ningbo MH string Co., Ltd.
MH waxay higsaneysaa inay siiso macaamiisha midabyo caalami ah oo dun caalami ah. Sawirro laga soo qaatay maktabadda midabka oo ka kooban 10,000 in ka badan, Mh kaarka midabka waxay bixisaa 400 oo dooro oo dooro ah, sidoo kale Mh waxay bixisaa jawaab deg-deg ah midabaynta midab-u-dhigga midabka, had iyo jeer la jaan qaada baahidaada tolidda.
Si loo caawiyo si loo yareeyo farqiga midabada, khabiiradu waxay sameeyeen nidaam cabbir cabbir ah. Xaqiijinta midab midab leh meelo midab leh, waxaan awoodnaa inaan isticmaalno tirada dhabta ah si loo cabbiro faraqa u dhexeeya midabada. Waxaa jira dhowr goobo midab leh oo la heli karo.
Faa'iidooyinka cabbiraadda midabka
Marka laga soo tago midabada sheyga oo loo beddelayo tirada dhabta ah ee farqiga u dhaxeeya cabbirka midabka, waxay kaloo ka caawisaa ilaalinta midabka midabka, fududeynta isuduwidda midabka iyo isgaadhsiinta midabka. Diyaarinta caalamiga ah ee suuqa dharka wax-soo-saarku waxay u baahan tahay inay sameyso isgaarsiin degdeg ah oo leh qaababka midabka iyo heerarka dunida oo dhan. Marka la eego cabbirka midabka, xogta noocan oo kale ah ayaa si sax ah loo gaarsiin karaa meelaha baahida loo qabo waqtiga.